Muuska Oo Kaalin Mug Leh Ka Qaata Caafimaadka Maskaxda Iyo Jidhkaba. | Somaliland Today
← Noloshii Sirta Ahayd Ee Radovan Karadzic Oo Maxkamada Danbiyada Ee Dunidu Ay U Haysato Danbiyo Dagaal.
SLT Sports:Mourinho: “Cristiano Ronaldo Wuxuu La Mid Yahay Zidane Cidkale Oo Lamid Ahina Ma Jirto” Iyo Qodobo Kale →
Muuska Oo Kaalin Mug Leh Ka Qaata Caafimaadka Maskaxda Iyo Jidhkaba.
(SLT-Hargaysa)-Muusku waxaa uu kamid yahay khudrada sida aadka looga jecelyahay dunida, hasa yeeshee, muhiimadiisa iyo wax tarkiisu waa mid ahmiyad wayn u leh caafimaadkeena iyo fayoobida maskax si wanaagsan u shaqaysa.
11-ka xaqiiqo ee ku saabsan muuska
-Wuxuu dhisaa awoodda: Muuska wuxuu dhisaa awoodda qofka. Cilmi-baadhis ayaa xaqiijisay in 2 xabo oo muus ah inay ku siinayaan awood u dhiganta 90 daqiiqo oo shaqo adag ah. Sidoo kale waxaa la xaqiijiyay in muusku uu yahay khudrada kaalinta 1aad ugu jirta orodyahannada ugu caansan adduunka.
isla-hadalka: Sahan ay sameysay Hay’adda MIND ayaa lagu ogaaday in dad ka cabanayay isla-hadal inay ku fiicnaadeen markii ay cuneen muuska. Arrintan ayaa la sheegay inay sabab u tahay iyadoo muuska uu ka kooban yahay tryptophan oo qofka ka dhigeysa inuu dareemo nasiino, isla arkaana ay sare u qaaddo niyaddiisa, guud ahaana uu dareemo farxad.
-Dhiig la’aan: Muusku wuxuu hodan ku yahay birta (ama iron-ta), taasoo sare u qaadda hemoglobin-ta ku jirta dhiigga, sidaasi darteed wuu ku caawinayaa haddii aad qabto dhiig la’aan.
-Dhiig-karka: Muuska waxaa aad ugu badan maadda potassium, waxaana ku yar cusbada. Hay’adda maamusha cuntada iyo daawada ee dalka Mareykanka ayaa u oggolaatay shirkadaha muuska ka shaqeeya inay si rasmi ah u sheegtaan in muuska uu awood u leeyahay inuu yareeyo khatarta dhiig-karka .
-Awoodda Maskaxda: Daraasad lagu sameeyay 200 oo arday oo wax ka barta dugsi ku yaalla dalka Ingiriiska ayaa lagu ogaaday in muuska uu waxtaro ardeyda wax baraneysa. Daraasadda ayaa muujisay in maaddada potassium-ka ee ku jirta muuska ay ka caawineyso ardayda inay noqdaan kuwo foojigan.
-Caloosha taagan: Muusku wuxuu wax ka tartaa inuu dhaqaajiyo caloosha, adigoo aan u baahan daawooyinka caloosha lagu socodsiiyo.
-Laab-jeexa: Muusku wuxuu si dabiici ah alle ugu beeray awood ka hortagta aaysiidha. Haddaba haddii aad dhib ku qabto laab-jeexa, isku day inaad cunto muuska.
-Neerfaha ayuu dajiyaa: Muuska waxaa ku badan Vitamin B oo dajiya nidaamka neerfayaasha ee qofka, wuxuuna aad u anfacayaa dadka ka shaqeeya shaqooyinka walwalka badan.
-Gaaska: Muusku wuxuu daawo u yahay cudurrada ku dhaca dheef-shiidka maadaama uu jilicsanyahay. Muusku wuxuu wax ka qabtaa aaysiidha ku badata caloosha, wuxuuuna hoos u dhigaa xanuunada ku yimaada caloosha
Jawiga ayuu dajiyaa: Dhaqamo badan ayaa muuska u isticmaala khudrad lagu dajiya jawiga qofka jidh ahaan iyo maskax ahaanba. Tusaale ahaan, dalka Thailand, waxaa muuska la siiyaa haweenka xaamilada ah si ay carruurtooda u dhalaan iyadoo jawigoodu deggen yahay.